के मान्छेको आयु सीमित भइसक्यो ? - Birgunj Sanjalके मान्छेको आयु सीमित भइसक्यो ? - Birgunj Sanjalके मान्छेको आयु सीमित भइसक्यो ? - Birgunj Sanjal
के मान्छेको आयु सीमित भइसक्यो ?
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:०८
बीबीसी । पछिल्लो दुई शताब्दीमा मान्छेको जिवन आयुमा धेरै सुधार आएको छ तर अझै पनि प्रविधिले यत्तिको गति लिँदा मानिस बुढयौलीबाट भाग्न सकेको छैन । १८४० को दशकमा मान्छे औसतमा ४० वर्ष भन्दा कमै बाँच्थे । यस्तोमा पोषण तत्व, सरसफाइ, रहनसहनलगायतका पक्षले मानिसलाई आजको उपलब्धिसम्म ल्याएको छ । विशेषगरी १९०० तिर मानिसले ऐतिहासिक ६० वर्षको औसत उमेरको नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । यसरी २० औँ शताब्दीपछि युद्धका परिस्थितिबाहेक मान्छेले निर्माण गरेका आधुनिक स्वास्थ्य सेवाले औसत आयुलाई ८० वर्षसम्म पुर्याइसकेको छ ।
सन् १९७० देखि नै स्वास्थ्य सम्बन्धी विकासले हृदयघात र स्ट्रोकका बिरामी ठीक गर्दै मानव जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको थियो । यसले नै २१ औँ शताब्दीमा महिलाको औसत आयु ८० र पुरुषको ७५ पुर्याएको हो । यसरी प्रत्येक चार वर्षमा मानिसको औसत उमेर एक दुईवर्ष गर्दै बढ्दै गइरहेको थियो । तर अचानक सन् दुई हजार एघार देखि यो क्रम रोकिरहेको छ । पहिले त वैज्ञानिकहरुले यसलाई अप्रत्याशित अस्थायी ट्रेन्ड हुन सक्ने शंका गरे किनकि निश्चित रुपमा २०१५ मा मृत्युको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको थियो जसबेलाको जाडोयाम अन्य वर्षभन्दा कठोर थियो भने रोग संक्रमणको दर पनि वृद्धि भएको थियो । तर बिस्तारै उनीहरुले यसका लागि केबल खराब मौसम मात्र जिम्मेवार नभएको पत्ता लगाए । जस्तैकि अहिले बेलायतीहरुको औसत आयु एक वर्षले बढ्न पनि १२ वर्ष लाग्ने पाइएको छ । किन यस्तो हुँदैछ त ?
यसको एउटा कारण मानिसको औसत आयु प्राकृतिक रुपमा त्यतिमै सीमित रहन सक्छ । तर अर्कोतर्फ विश्व तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने बीस वर्ष अगाडि फ्रान्सकी एक जिएन काल्मेन्ट १२२ वर्षसम्म जिवित रहेकी थिइन् जसलाई विश्वमै सबैभन्दा धेरै बाँच्ने मानिस बताइन्छ । यसरी उनी जसरी दुर्लभ आयु भएका मानिसहरु पनि पछिल्लो समय एक सय पन्ध्र वर्षमा सीमित हुन थालेको जर्नल नेचरको अनुसन्धानमा प्रकाशित गरिएको छ । यसबारेमा थुप्रै विशेषज्ञहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । जस्तै कि अमेरिकी वंशविद् डेभिड सिनक्लेरले जीवनआयु सम्बन्धी तथ्याङ्कमा आधारित किताब लेखेका छन् जसमा उनले जिनहरुलाई बुस्ट गरि लामो समयसम्म बाँच्न सकिने तर्क उल्लेख गरेका छन् । उनी जस्ता धेरै विद्हरुले त्यसो गर्न सम्भव रहेको बताइरहेका छन् ।
तर सत्य जे भए पनि बेलायतको जनसङ्ख्याको जिवन आयु सीमित नहुनुपर्नेमा थुप्रै प्रमाण भेटिएको छ । किनकि जापानकै उदाहरण लिने हो भने केही वर्ष यता त्यहाँको औसत आयु ठूलो अन्तरले बढ्दै गइरहेको छ । यसरी धनी र विकसित देशहरुलाई हेर्दा बेलायतसहित अमेरिकामा पनि औसत आयु वृद्धिदर कम रहेको पत्ता लागेको छ । यसमा अमेरिका बेलायतभन्दा पछि परिरहेको ओएनएसको अध्ययनमा देखिएको छ ।
तर यसमा पनि थुप्रै किसिमका जटिल पक्षहरुलाई मध्य नजर गर्नुपर्ने हुन्छ । ओएनएसका ‘एजिङ एक्सपर्ट’ एडवर्ड मोर्गानका अनुसार यी ट्रेन्डका पछाडि थुप्रै जटिल कारणहरु छन् जसमा मानव जीवनलाई ऐतिहासिक स्तरमा पुर्याउन गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।
बत्ति ननिभाई सुत्ने बानीले पनि मुटु र मधुमेहको जोखिम बढाउँछ : अध्ययन्